नेपाल आज | ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ : क्यान्सरसँग लडिरहेकी एक बालिकाको कथा
‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ : क्यान्सरसँग लडिरहेकी एक बालिकाको कथा
‘गाई त बाध्यौं ढुंग्रोमा मोही छैन, मोही छैन
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’
गरिबको पीडा बोल्ने यो र यस्तै गीत गाउँदै बजाउँदै सामाजिक जागरण, राजनीतिक चेतना फैल्याउने कम्युनिष्टहरु अहिले सरकारमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा राज्यले करोडौं खर्चेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको क्यान्सर पनि राज्यले कोशीको नदी जसरी पैसा बगाइदिँदा निको भयो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका लागि नेपालमै सम्भव परीक्षणका लागि जापान पठायो । करोड बढी खर्च भयो । सानो आन्द्राबाट रगत बग्ने कुरा हेर्न नेपालमा सम्भव छैन भनेर ग्रान्डी अस्पतालले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई भारत पठायो, खर्च राज्यको भयो । त्यो उपचार नेपालमै सम्भव छ भन्ने जवाफ नर्भिक अस्पतालले दिएपछि बिरामी रेफर र कमिसनको कुरामा शंका गरियो ।
अर्को तिर एक युवकले उपचार खर्च धान्न नसकेर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको तेस्रो तल्लाबाट हाम्फालेर ज्यान फाले ।
अहिले एक बालिका छिन् जो मृत्युसँग लडिरहेकी छन् । मात्रै १२ लाख रुपैयाँ जुट्ने हो भने उनले जीवन पाउन सक्छिन् । यो संसार स्वार्थी छ भनेर जति तीतो पोखेपछि यो संसारमा असल मान्छे पनि छन् । ती असल मान्छेले चाहेमा दाङकी गरिब परिवारकी १५ वर्षीया नारायणी घर्तीमगरको ज्यान जोगिन सक्छ ।
बालिकाका बाबु भूपेन्द्र प्रकाश मगर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा टर्की पुगको छन् । उनी टर्की गएको पाँच महिना भयो । यता तीन महिना अगाडि उनकी छोरी नारायणीमा हड्डीको क्यान्सर देखियो । भूपेन्द्रले मासिक २०–४० हजार घर पठाउँछन् । त्यो घर खर्चमै सकिन्छ । १५ लाख जुटाउन केही वर्ष लाग्छ । त्यतिबेलासम्म नारायणीलाई क्यान्सरले खाइसक्न सक्छ ।
नारायणीका काका भीमले भने, ‘भतिजीको उपचार चितवनको क्यान्सर अस्पतालमा भइरहेको छ । डाक्टरले १५ लाख खर्च लाग्छ भनेका छन् । हामी जस्ता गरिबलाई सरकारले गर्ने सहयोग १ लाख रहेछ । त्यो पनि नगद होइन, उपचारमा छुट मात्रै ।’
सम्पत्तिको नाममा घर्ती परिवारसँग दाङमा एक कठ्ठा जमिन छ । छोरीको ज्यान जाने डरले टर्कीमा बाबु भूपेन्द्र मन अमिलो पारेर बसेका छन् । उपचारका लागि धेरै पैसा चाहिने भएपछि रातोदिन काम गरिरहेका छन् । यता नेपालमा श्रीमती र एक छोरा पनि छन् । छोरी अस्पतालमा छिन् ।
घर्ती परिवार मर्नु न बाँच्नुको दोसाधमा पुगेको छ । किनभने कुनै पनि बाबुआमाले आफ्ना सन्तान मर्दै गरेको हेर्न कहाँ सक्छन् र ? तर विवसता यस्तो भयो कि अब पैसा नभएकै कारण कतै नारायणीको ज्यान जाने हो कि ? भन्ने चिन्ता बढी भएको छ ।
केही उपाय नभएपछि नारायणी भगवती बचाउनका लागि सार्वजनिक अपिल उनीहरुले गरेका छन् । भगवतीको उपचारका लागि सहयोग रकम जम्मा गरिदिन घर्ती परिवारले नारायणीकी आमा भगवतीको नाममा खाता खोलिएको छ । दयालु दाताले निम्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिन सक्नु हुन्छ ।
खाता नम्बर: ०५१८००००१६४८
विदेशका लागि स्विफ्ट कोडः BOKLNRA
सम्पर्क : भगवती घर्तीमगर , ९८४७९०२९६८ ।